XOG XASAASI: Maxaa ka jira in ciidamo Jubbaland ka goostay ay isku dhiibeen Militariga Soomaaliya? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG XASAASI: Maxaa ka jira in ciidamo Jubbaland ka goostay ay isku...
Gedo (Halqaran.com) – In ka badan 100 oo Askari oo ka tirsanaa ciidamada Darwaaiishta Jubbaland ayaa isu dhiibay ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan degmada Luuq ee gobalka Gedo.
Wararka ay haleyso Halqaran.com, ayaa sheegaya, in ciidamadaan isu dhiibay Militariga Soomaaliya ay ku sugnaayeen Degmada Baledxaawo ee gobalka Gedo, waxayna toos uga amar qaadan jireen maamulka Axmed Madoobe.
Wararka gobalka Gedo ka imaanayo ayaa soo sheegaya in saraakiil Itoobiyaan ah ay wadahadal la galeen ciidamadaan, lagana dalbaday in ay tagaan Luuq oo ay isu dhibaan ciidamada Qaranka.
Wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in ciidankaan ay hadda ku sugan yihiin xero ku taalo degmada luuq.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Militariga Somaliya ayaa la sheegay inay ka dambeeyaan qorshaha Ciidamadan Jubbaland ka tirsan ay isugu soo dhiibeen Ciidamada Dowladda Federalka Somaliya.
DF Soomaaliya iyo Maamulka Jubbaland ayaa waxaa ka dhex taagan khilaaf adag oo ka dhashay doorashadii Axmed Madoobe dib loogu doortay ee Kismaayo ka dhacday.
Ciidamada ka goostay Jubbaland
ku biiray milatariga Somaliya